वेब-घटनाहरूले घटना उद्योगलाई कसरी बाधा पुर्‍याइरहेका छन्? - inCast
वेब-घटनाहरूले घटना उद्योगलाई कसरी बाधा पुर्‍याइरहेका छन्?
सङ्गठनहरू सधैं भर्चुअल घटनाहरू र वेबिनारहरूले भौतिक घटनाहरूलाई कसरी बाधा पुऱ्याउन सक्छन् भन्ने बारे अत्यन्त उत्सुक छन्। जहिलेदेखि महामारी भयो, अधिकांश कम्पनीहरू रिमोट वा हाइब्रिड कार्य संस्कृति मोडेलमा सरेका थिए, र वेब-इभेन्टहरू होस्ट गर्ने यो नयाँ मानक अत्यन्त लोकप्रिय भयो। तर, वेब-घटनाहरू अब केवल एक योजना वा विचार होइनन् तिनीहरू घटना उद्योगको पूर्ण वास्तविकता हुन्।
वेब-घटनाहरू उपस्थित हुन सजिलो छ, लागत-कुशल, राम्रो ROI प्रदान गर्नुहोस्, र दर्शकहरूको फराकिलो सेटमा पुग्न सकिन्छ। तिनीहरू धेरै सुविधाजनक छन् किनभने विश्वभरि कहींबाट पनि सामेल हुन सकिन्छ।
वेब घटनाहरू यहाँ किन रहन्छन्?
विश्वभरि कहिँबाट पनि पहुँच गर्नुहोस्
हामी-घटनाहरू भर्चुअल संसारमा जडानको पूर्ण नयाँ स्तर हो। तिनीहरूले टाढाको काम गर्दा, ठूला-ठूला भर्चुअल सम्मेलनहरू आयोजना गर्ने र अरू धेरैको समयमा कर्मचारीहरू बीचको व्यावसायिक बन्धन कायम राख्न मद्दत गर्दछ।
व्यक्तिगत कार्यक्रम आयोजना गर्नुको तुलनामा ठूलो-स्तरीय वेब कार्यक्रम होस्ट गर्नु कम महँगो छ। तसर्थ, वेब-इभेन्टले सफलतापूर्वक लगानी र उच्च लागत-दक्षतामा राम्रो प्रतिफल प्रदान गर्न थप समय, पैसा, र प्रयासहरू बचत गर्दछ।
फराकिलो पहुँच र संलग्नता
वेब-इभेन्टहरू जुनसुकै समयमा जुनसुकै ठाउँबाट पनि उपस्थित हुन अत्यन्तै सुविधाजनक भएकाले, तिनीहरूले अन्तत: ब्रान्डको दृश्यता स्थापना गर्नमा मद्दत गर्ने लक्षित दर्शकहरूलाई फराकिलो पहुँच र उच्च संलग्नता प्रदान गर्छन्।
ग्लोबल बैठक उद्योग मा Statista अनुसन्धान रिपोर्ट को अनुसार, यो 2020 मा लगभग एक ट्रिलियन USD अनुमान गरिएको छ, र यो बजार 5.9 प्रतिशत को CAGR रिपोर्ट गर्दै, 2028 मा लगभग 1.6 ट्रिलियन USD पुग्ने अनुमान गरिएको छ।
विश्वव्यापी कम्पनीहरूले व्यवसायहरूमा COVID-19 को प्रभावबाट पुन: प्राप्ति गर्न उपभोक्ताहरू र दर्शकहरूलाई संलग्न गराउन डिजिटल इकोसिस्टमहरू खोजिरहेका छन्। भर्चुअल घटनाहरूले कम्पनीहरू र विश्वका व्यक्तिहरूमा लाइफलाइन स्थापना गर्‍यो जुन COVID-19 महामारीले अप्ठ्यारो पारेको थियो।
भर्चुअल घटनाहरूले पेशेवरहरूले सम्मेलनहरूमा भाग लिने तरिकालाई पूर्ण रूपमा परिवर्तन गरेका छन्। तिनीहरूले पैसा, समय र स्रोतहरू बचत गर्छन्, सही प्रविधिको साथ पनि व्यक्तिगत घटनाहरू जत्तिकै राम्रो छन्।
inCast एउटा वेबकास्टिङ प्लेटफर्म हो, जसले तपाईंलाई निर्दोष भर्चुअल घटनाहरू होस्ट गर्न र प्रवर्द्धन गर्न सक्षम पार्दै प्रत्यक्ष भिडियो र अडियो कन्फरेन्सिङको साथमा ठूलो मात्रामा भिडियो वेबकास्टिङ कार्यक्रमहरूलाई सशक्त बनाउँछ। केवल दर्जनौं प्रस्तुतकर्ताहरू र विश्वभरबाट उपस्थितहरूको अन्तिम संख्या जम्मा गर्नुहोस् र तपाईंको लक्षित दर्शकहरूलाई तपाईंको अद्वितीय ब्रान्ड कथा सुनाउनुहोस्।
हाम्रो असाधारण रूपमा निर्मित नेक्स्ट-जेन सुविधाहरूको साथ अन्तरक्रियात्मक र निर्बाध, inCast ले तपाइँको व्यवसायको कठिन भागहरूमा ध्यान केन्द्रित गर्नेछ, ताकि तपाइँ निर्बाध अन्तरक्रियात्मक र लागत-कुशल वेब-घटनाहरूद्वारा तपाइँका दर्शकहरूलाई प्रभाव पार्नमा ध्यान केन्द्रित गर्न सक्नुहुन्छ।
inCast एक प्रयास दिनुहोस्